I-Apple Ifinyelela Inkampani Engu-1 Eyigugu Kakhulu Futhi | Ngivela ku-mac
I-Apple Ifinyelela Kunombolo 1 Inkampani Eyigugu Kakhulu Futhi
Impi phakathi kwezinkampani ezimbili ezinkulu zobuchwepheshe, i-Apple ne-Microsoft inamandla impela futhi yinde ikakhulukazi ngesikhathi. Zombili lezi zinkampani zizithatha kahle kakhulu ngoba zihlezi zise-Top futhi akekho kuzo ofuna ukushiya indawo yokuqala. Lokho kuhle kubasebenzisi abazohlala bethola inguqulo engcono kakhulu yakho kokubili. Ngemva kokulwa kanzima, I-Apple ikhuphukela kunombolo yokuqala futhi njengenkampani ebaluleke kakhulu emhlabeni.
Ukwenyuka okubukhali kwenani lentengo ye-Apple kuvumele inkampani yama-apula ukuthi iphinde ithole isihloko senkampani edayiselwa umphakathi enemali yemakethe ephezulu kakhulu emhlabeni. Idlule iMicrosoft, ebikade isendaweni yokuqala isikhathi esingaphansi kwenyanga. Umbiko ongaqinisekisiwe wezinhlelo ezinolaka ze-Apple fvula izimoto ezizimele isize umfutho inyuke ngo-6% ngesonto eledlule.
Izintengo zesitoko seCupertino bezilokhu zikhuphuka ngendlela emangalisayo iminyaka. Njengoba inani lenkampani lifinyelela ku-$ 2 trillion ehlobo lika-2020. Kusukela lapho, selivele likhuphuke cishe ku-$ 2,5 trillion. Manje, ngemva kokumemezela imiphumela yezezimali yekota yesithathu, amasheya ehle ngenani. Ikakhulukazi ngenxa yemiphumela yokuthengisa ephansi kunaleyo ebilindelwe ye-iPhone. Kwakungalesi sikhathi lapho inkampani yalahlekelwa isikhundla senombolo, yasinikeza iMicrosoft, eyaba yinkampani ebaluleke kakhulu emhlabeni.
Kodwa-ke, ngesonto eledlule, umbiko ubonise ukuthi i-Apple ifuna ukusheshisa ukwakhiwa kwayo kwe-Apple Car futhi isilungele ngo-2025. Lokho kubangele ukuthi intengo yesabelo iphinde ikhuphuke. Imali yemakethe manje isiyi- $ 2,634 trillion, okwamanje ibeka inani layo ku-$ 2,576 trillion. Ngale ndlela uthola inombolo yokuqala futhi kusezingeni, ukwehlisa iMicrosoft. Nakuba sicabanga ukuthi kuzoba yindaba yesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple Ifinyelela Kunombolo 1 Inkampani Eyigugu Kakhulu Futhi
Iwashi ledijithali le-Seiko lango-1988 elalixhunywe ku-Mac lithengiswa endalini
I-Apple Podcasts ayilungile njengoba inkampani ifuna sikholwe